Isimada Puntland oo ku guulaystay wajiga koowaad ee xalka xiisadda ka taagan Boosaaso | Somsoon
Home WARAR Isimada Puntland oo ku guulaystay wajiga koowaad ee xalka xiisadda ka taagan...
Isimada Puntland oo ku guulaystay wajiga koowaad ee xalka xiisadda ka taagan Boosaaso
Isimada dhaqanka gobolka Bari ayaa xal ka gaaray xiisadii ka taagnayd magaalada Boosaaso ee u dhaxeysay madaxda shirkadda PDG iyo xukuumadda madaxweyne Dani.
Kulamo ay saacadihii ugu dambeeyey isimada gobolka Bari la yeesheen masuuliyiin ka tirsan xukuumadda, madaxda shirkadda PDG iyo saraakiishii hogaaminayey ciidamadii Carmo ka yimid ayaa ugu dambeyn is fahan laga gaaray xiisaddi ka taagneed Boosaaso maalmihii lasoo dhaafay.
Arrinta ugu weyn ee laysku afgartay ayaa ah in ciidamadii ka soo ruqaansaday Carmo ay dib u laabaan iyo sidoo kale in wada hadal lagu dhameeyo khliaafka sababay madaxda shirkadda iyo xukuumaddu ay is qabtaan, kadibna ciidamo u abaabulan qaab beeleed ay gudaha u galaan magaalada.
Sebtida maanta ayaa lagu wadaa in ciidamadii maalmo ka hor gudaha u galay magaalada Boosaaso ay dib ugu laabtaan deegaanka Carmo ee isla gobolka Bari.
Ciidamadaas oo isugu jira kuwo ka socda Daraawiish Puntland iyo maleeshiyo beeleed waxaa maanta Boosaaso ka raaci doona isimada dhaqanka gobolka Bari iyo masuuliyiin kale, si aysan isugu dhicin ciidamada ku sugan inta u dhaxeysa Boosaaso iyo Carmo, iyadoo la sheegay in wixii markaas ka dambeeya loo fadhiisa doono xalka kama dambeysta ah ee arintaas.
Article horeBaarlamaanka Puntland oo maanta cod u qaadaya guddiga doorashooyinka
Article socoda CC Warsame oo sharaxay sababta ka reebtay Madasha Xisbiyada Qaran